Brazing Brass pipe | induction igwe na-emepụta igwe | ihe ndozi oku
Brass Brass pipe
Ngwácha na-eme ka ọla kọpa gwuo na brass Pipe na nkwụsị
Ebumnuche: Ịgbagharị ọtụtụ mgbakọ ọla na ọla kọpa eji eji mmiri mee ihe
Okpomọkụ 1350 ° F 730 ° C
200 ugboro ugboro ma ọ bụ 280 kHz (mgbakwunye ụda)
Ngwá ọrụ DW-UHF-10KW nhazi ọkụ ọkụ, isi ọrụ na-arụ ọrụ na ogwe aka 1μF abụọ na ihe ntanetị a na-agba agba na 3
Nhazi: A na-eji eriri atọ a na-ehicha ụlọnga mee ihe iche iche iji mee ka akụkụ dị iche iche dị iche iche dị. A na - ezukọta ihe na ngwongwo ma na - ewe iwe. Oge okpomọkụ na-adịgasị iche site na akụkụ iji wepụta akụkụ buru ibu na-ewe ihe na-erughị oge 3, ma obere akụkụ dị ọkụ na-erughị 20 sekọnd. Mgbe a kpochapụrụ akụkụ ndị ahụ ka mma.
Ikwughari ugboro ugboro: nkowa doro anya nke induction kpo oku na-akwado usoro nke a na-ekwughachi.
Economy: usoro a na-enye ohere maka iji okpomọkụ dị elu karịa ihe ọkụkụ
Categories Technologies Tags Brass Brass pipe, Ngwácha na-eme ka ọla kọpa gwuo na brass Pipe na nkwụsị, Na-ekpo ọkụ na-esi ísì ụtọ, ogologo oge brazing brass pai, RF brazing okpu ọla
Brazing Copper Tube na Brass Fitting With Induction
Ebumnuche: Iji mee ka ọkụ kpoo ọkụ iji gbanye mgbidi ọla kọpa na ihe eji eji ọla mee ihe site na iji eriri ngwusi. Nhazi na-eme n'okpuru ikuku nke Nitrogen na 4% hydrogen gas. Ihe nkedo nke braze na-agbaze na 1190 Celsius F, ma akụkụ dị mkpa ka edebe n'okpuru 1300 F F. A ghaghị ịhazi akụkụ ahụ na ọnụego 175 na 200 kwa elekere nke na-atụgharị n'ime 18 sekọnd nke oge ọkụ oge kwa otu.
Ihe ọla kọpa tubing na-atụle 0.5 ″ OD na 2 ″ Long, Brass fitting, Braze Preform, No Flux.
Okpomọkụ dị n'elu 1190 Celsius ma ọ gaghị aga 1300 Celsius F
Akụrụngwa: DW-UHF-10KW arụpụta ihe siri ike na ntinye ọkụ ọkụ na-enye ihe atọ (3), ndị na-akwado 8 (0.66) niile na 10 μF, na ihe mgbakwasị ụkwụ anọ na-agbanwe agbanwe. Nhazi DW-UHF-XNUMXKW mmepụta ike ike ala na-enwe yana ihe anọ dị iche iche a na-eji agbagharị agbagharị na-emepụta iji nweta ihe ndị na-esonụ.
Nsonaazụ • E nyere ikuku rịọrọ n'okpuru ite bell site n'inye 95% Nitrogen / 5% Hydrogen na ọnụego nke 25-30 cfh. • Ọdịdị nke ikpo ọkụ nke nanị 10 sekọndị dị mkpa iji nweta mmeri zuru oke nke gafere njedebe nke 18 sekọnd.
Categories Technologies Tags Brass Brass kwesịrị ekwesị, Brass Brass pipe, eji ọla kọpa ọla kọpa, Brazing ọla kọpa tube na induction, Ejiri ike brazing nke ukwu, Ejiri ọla kọpa dị elu, RF brazing, RF na-eme ka brazing ọla kọpa tube